STRAWBERRIES QALABKA IYO DARYEELKA SAXDA AH - STRAWBERRIES
Diyaarinta ciidda beeritaanka strawberries
Strawberries waxay ku koraan hal meel dhowr sano oo isku xigta. Diyaarinta ciidda waxay u baahan tahay fiiro gaar ah, sababtoo ah dhalidda berry waxay ku xiran tahay diyaarinta saxda ah.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad doorato goob. Waa in ay ahaataa meel bannaan, oo leh iftiin qorrax leh. Indeed, sababtoo ah la'aanta qorax ku filan, waxaa jiri doona goosashada xun ee strawberries. Oo mid ka mid ah cidhiidhiga kale, ee hooska waxaa inta badan badanaa ah qoyaan, cudurada fangas kala duwan horumariyo on caleemaha iyo xididdada.
Nooca carrada ee goobta wuxuu noqon karaa wax kasta. Si kastaba ha noqotee, duurka strawberry ma kori doono halka uu jiro ciidda ciid ama dhoobo. Waxaa jira sababo tan. Xannhadda Sandy waa yar tahay mid aad u daran oo leh maaddooyin wax ku ool ah, iyo xididdada dhirta oo si dhaqso ah u engegay oo kulul. Cawska dhoobada ayaa cufan, ma fiicna hawo fiican, kaas oo cufanaya xididada oksijiinta oo uu ka soo baxo qoyaan badan. Dhirta ayaa joojiya koritaanka. Si loo hagaajiyo tayada dhulka, waxaa lagama maarmaan ah in la dalbado bacrimin - humus, kaas oo u oggolaanaya ciidda inay noqoto dabacsanaan.
Waa in ay taxadaraan si aysidhka carrada. Haddii ciidda waa acidic, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in ay bacrimiso: codsan bacriminta organic, iyo dhulka, leh qadar weyn oo alkali, ku dar bacriminta leh content macdanta.
Markaad dooranaysid meel daaqa beerta, waa inaad sidoo kale tixgelisaa heerka biyaha dhulka, ma jiraa meel kasta oo biyuhu istaagi karaan. Si loo yareeyo saameeyahan, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dheecaan, laakiin si aysan dhulka u ahayn mid qalalan ama qoyan.
Waa inaad sidoo kale xasuusataa in strawberries aan la beeray karaa laba jeer isla meesha. Waxay kugula talinayaan iyada beerista meesha yaanyada, baradhada, kaabajka hore u koray. Waxay dareemi doontaa raaxo badan kadib basasha, toon, karootada, bocorka, digirta.
Sidaas, tallaabada xigta waa in loo diyaariyo dalka for geedo. Waa lagama maarmaan in la cuno haramaha dhammaan cawska iyo cawska kale ee ka soo baxa beerashadaada. Gaar ahaan waxaad u baahan tahay inaad ka saarto cawska, cawska, cawska (waxay ka qaadaan dhammaan walxaha waxtar leh ee dhulka iyo dhirta). Si arrintan loo sameeyo, qodo gebi ahaanba sawirada, iyo gacantaada oo dhan caleemaha ka saar. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa strawberries mustaqbalka, ku daaweyn lahayd geedo yaryar, tusaale ahaan, wareegto, tornado. Mudo laba toddobaad ah cawsku waa inuu hallaabaa.
Intaa ka dib waxaan u diyaarin ciidda: waxaan codsanaynaa bacriminta organic (Gypsum, Lime). Goobta waxaa lagu qodayaa oo loo qoondeeyey intii suurtagal ah. Ka dib oo dhan, ciidda dabacsan waxay gacan ka geysaneysaa isbedelka degdegga ah ee geedo si meel cusub, iyo koritaanka hore.
Tallaabada muhiimka ah waa qorsheynta beerashada strawberries. Tusaale ahaan, saf ama hal xabbo oo kabadan.
Si aad u ilaaliso safka leh strawberries toos ah, pegs ayaa hammered labada dhinac iyo xadhig ayaa loo kala fidiyo.
Hadda waxaad bilaabi kartaa geedo strawberry.
Xeerarka beeritaanka strawberry
Maxay yihiin hababka soo degaya?
Geedo strawberry waxaa lagu beeray dhulka dhowr siyaabood. Bannaanka isticmaali safka kaliya iyo safka laba-geeska ah.
Mabda'a beeritaanka hal-ku-dhererka ah waa in masaafada u dhexaysa labarabka 60-70 cm, iyo duurka geedo waxaa laga beeray qiyaastii 15-20 cm. Run ahaantii, sanadka ugu horreeya, strawberries beerta ficil ahaan ma midho dhalin, laakiin waxay soo saaraan shaarib ah oo buuxiya booska bilaashka ah ee safka.
Beeraha laba-caleenta ah waa mid waxtar leh, waa wax aad u wanaagsan xagaaga, sababtoo ah geedo badan oo suuragal ah ayaa lagu beeray hal shay oo dhul ah, waxaadna cuni kartaa miro ku dhowaad sanadka la beeray. Masaafada u dhexeysa labiska waa 70 cm, inta u dhaxaysa laynka 30 cm, iyo geedo waxaa lagu beeray 15-20 cm kala gooni ah.
Hab kale oo loo isticmaalo waa geedo geedo sariirood ah. Waxay u fiicantahay goobaha ay ka jiraan biyaha. Goobta sariiraha waa laga bilaabo koonfurta ilaa waqooyiga, laba saf oo geedo ah ayaa lagu beeray geesaha, iyo bartamaha waddada (qiyaastii 30 cm ballaaran) waa mid madhan.
Bannaanka u badan u isticmaalaan dhirta strawberry beerto farsamo. Tani waxaa loo sameeyaa si loo soo saaro dhammaan geedo guga, kaas oo aan ubaxay sanadka ugu horeeya. Ka dib markii ay duurka jiran yihiin soo baxay, waxaa jiri doona meel loogu talagalay koritaanka caadiga ah dhirta kale.
Waxyaabaha ugu muhiimsani waa inay noqdaan waqtigii loogu talagalay
Shuruudaha adag ee beeritaanka strawberries ma jiraan. Waxaa lagu beeray guga iyo dayrta, iyo xagaaga. Laakiin waxaad u baahan tahay inaad xisaabta ku darto xilli ciyaareed gaar ah.
Guga. Waqtigaan sanadka, geedo waxaa lagu talinayaa in la beeray sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo bilawga shaqada ee beerta, horraantii Abriil. Waxa ugu muhiimsani maaha inay seegaan waqtigan. Haddii ay duurka strawberry waxaa la beeray waqti ka waqti waqtiga la qoondeeyey, bishii May, ka dibna xawaaraha ay horumarinta noqon doonaa mid gaabis ah. Waqtiga uu soo degayo ma noqon karo. Guga, geedo waxaa lagu beeray isla markiiba ee dhulka furan.
Summer. Iyada oo habka saxda ah ee lagu beerayo strawberries, waxaa suurtagal ah in ay soo qaado berry hal sano ah. Waxaa fiican in la beero roobka ka dib ama cimilada daruuraha leh, markaa way fududahay in la bilaabo. Waraabin dheeraad ah ayaa lagula talinayaa, markaa waa lagama maarmaan in la daboolo ciidda, i.e. u daa si aad uga fogaato muuqaalka daloolka dusha sare.
Dayrta waa waqtiga ugu fiican ee sannadka beerashada geedo. Tani waxay ka fiican tahay laga bilaabo Agoosto 20 ilaa Sebtembar 15, laakiin wakhtigu waa shuruudo, waxay ku xiran tahay cimilada gobolka ee qorshaynta la qorsheeyey. Laakiin waa lagama maarmaan in la helo waqti ka hor bilowga ah ee dhaxan ugu horeysay.
Iyadoo aan loo eegin xilli, ka hor beerashada strawberries, waxaa lagama maarmaan ah si loo diyaariyo geedo: nidaamka xididka ka cayayaanka kala duwan (iyadoo la isticmaalayo xal of vitriol buluug). Si toos ah, ka hor inta beerto duurka, xididdada toosan. Waxay ku fadhiisanayaan meel qumman, oo dheer - si cad u gooyay.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan daryeelka iyo beeritaanka currant madow
Sidee baad u kori kartaa?
Caadi ahaan, strawberries waxaa lagu koray laba siyaabood: gudaha lagu koriyo iyo dhulka banaan. Hababka labaduba waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda.
Ka hor inta beerto geedo ee dhulka furan, bilowga, waa in la diyaariyaa. Ciidda waa la furfuray, lana xoojiyey helitaanka ogsijiinta. Markaas waxaad u baahan tahay waraabinta, oo kaliya ka dib, soo deg.
Strawberries, lagu dhex beeray koriyo, filimka hoostiisa, waxaa lagu beeray horraantii kuwa koraya dhulka. Habkani wuxuu ku habboon yahay noocyada hore. Tilmaamaha filimka ayaa la ururiyaa bisha Abriil. Waxay u baahan yihiin in la duubo, ka furfuray ciidda, oo ku waraabiyay biyo diiran. U hubso inaad u baahato heerkulbeeg si aad u xakameyso heerkulka. Heerkulka ka sareeya 25 ° C, filimka ayaa laga saaraa maalin kasta. In strawberries dayrta waxaa lagu daboolay caws ama caleemo geedaha. Bacriminta waxaa lagu dabaqaa: peat ama compost.
Intaa waxaa dheer, strawberries weli sii kordhaya saf u taagan. Nidaamkani wuxuu u egyahay tallaabooyinka, tiirarka. Aad bay u fiican tahay meelaha yaryar. Weelasha gaarka ah ee la mid ah "Dahabshiil", ku rid fogaan 10 cm midba midka kale. Wixii ay u buuxsamaan kulul ee peat isku dar ah, humus, sod dhul. Marka uu dhaxan yahay, weelka waa la saaraa oo lagu daboolaa agrofibre, caleemo, peat. Marka dhaxan, strawberries ayaa la daboolay barafka.
Markaad sii kordhiso strawberries ee hoos agrofibre, waxaad u guran kartaa hore ee dhowr todobaad. Agrofibre wuxuu hayaa heerkul, wuxuu ka ilaaliyaa dabaysha iyo dhaxanta.
Sidoo kale, strawberries waxaa sidoo kale lagu koray bacaha. Ciidda ka hor diyaarisay waxaa lagu shubay boorsada, iyo geedo waxaa lagu beeray godadka. Kadibna waxay ku xidhan yihiin saqafka.
Daryeelidda strawberries si habboon
Waraabinta strawberries si toos ah waxay ku xiran tahay waxa cimiladu noogu dhigayso. Inta badan ee waraabinta waxaa lagu go'aamiyaa qalajinta ciidda. Waqtiga ugu fiican ee waraabinta waa subixii hore. Caleemaha way qalalan yihiin fiidkii. Ma jiraan ubaxyo, dhirta ayaa la waraabiyaa. Waraabinta waxay u egtahay roob yar, iyada oo boodhka gargaarka ah ayaa la dhaqay caleemaha.
In kulaylka, strawberries waxaa lagu talinayaa in la waraabiyo toddoba maalmood oo kasta, biyaha waxaa lagu shubay qiyaas ahaan 10 ilaa 25 litir mitir labajibbaaran. Iyada oo muuqaalka muuqaalka miro, inta jeer ee kululeynta la yareeyo. Biyaha loo isticmaalo waraabinta waa diirimaad, heerkulku waa qiyaastii 20 darajo. Ku waraabinta biyo qabow waxay saameyn kartaa koritaanka geedo.
Marka ubaxyada ugu horeysa ay soo muuqdaan, biyaha ayaa lagu shubay dhulka, ka fogaanshaha xiriirka duurka. Biyaha ma ku shub on berry, maadaama ay bilaabi karaan kallana.
Waxaannu burburinno haramaha
Ilaalinta geedku wali waxay u baahan tahay inay bilowdo ka hor beerashada geedo. Hase yeeshee waxaa jira haramaha oo sii wadaya inuu xiro dhirta, qaadashada qoyaanka, nafaqooyinka. Waa inaan si joogto ah udinno labadaba inta lagu jiro xilliga oo dhan ee Bisaylkiisa dalagga, iyo ka dib. Tani waa in la sameeyaa wakhti ka mid ah 8. Qoto-dheeraanta dabacsanaanta waa qiyaastii 10 cm. Waxaa wanaagsan in la helo nidaamka asalka ah ee cawska dhulka ka dibna tuur.
Meelaha waaweyn oo lagu beeray strawberries, herbicides waxaa loo isticmaalaa in laga takhaluso caws iyo haramaha. Waxaa lagula talinayaa in ay ku buufiyaan 14 maalmood ka hor intaan loo baahnayn.
Siyaabo kale oo loola dagaallamo waxay ku beeri karayaan, waxay ka dhigeysaa dhul bacrin ah oo ka caawiya in laga takhaluso haramaha. Markaas waxay ku beeri doonaan wax ka mid ah dalagyada xilliga qaboobaha, oo kaliya sanadka soo socda waxay ku beeri quutulis.
Strawberries ma laha cayayaanka badan, laakiin waxay u baahan yihiin daaweyn degdeg ah. Dhirta la daaweeyo ka hor inta muuqaalka ubaxyada ama ka dib markaad soo qaadato berry.
Cayayaanka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah:
Hoos u dhig. Leaves waa ciribtirmaan, waxay noqdaan huruud, iyo berry qudhoodu waa yar yihiin. Karbofosom ka shaqeyn goosashada ka dib.
Nematodes. Waxay ku nool yihiin caleemo, waxay si buuxda u dhaleeceynayaan dhirta: caleemuhu waxay noqdaan mid madow oo midab leh, strawberries ma koraan. Kalluunka ay cuduradu ku soo baxaan.
Cayayaanka kale waxaa ka mid ah jiritaanka strawberry, weevil, whitefly. Ka saar iyaga oo leh karbofos, aktar.
Snails iyo slugs. Waxay leeyihiin saameyn waxyeello ku saabsan berry.
Si looga fogaado dhirta, waxaad ku rushaysaa carrada soodhaha.
Xakamaynta cayayaanka ayaa u baahan in la bilaabo dayrta, iyada oo la daaweynayo iyo jeermi-dilka ciidda. Habka ugu fiican waa in la daboolo filimka dhulka, ka takhalusta dhammaan haramaha. Waxaa lagama maarmaan ah in waqtigu ka saaro caleemaha qalalan, kormeerida qoyaanka ciidda.
Cudurada strawberries iyo daaweyntiisa
Cudurada ugu weyn ee strawberry waa:
Qamadi ciriiri. Boorash oo leh ubaxyada ubaxyada ah ee caleemaha waxay si buuxda u saameeyaan caleemaha, burooyinkeeda, miraha. Daaweyntu waa: miro kuleylka waqtigeeda, ka takhalusida haramaha, gabi ahaanba burburiya dhirta buka. Isku buufin by Azocene.
Marka firfircoonida goor dambe ay sii deyneyso koritaanka, caleemaha cagaarka ayaa u muuqda, geedo way dhiman karaan. Si lagula dagaallamo waxaad u baahan tahay in aad qoydo ciidda, iyo marka calaamadaha ugu horreeya muuqdaan, isla markiiba ka saar strawberries.
Caleenta macaan ayaa ku faafta hawada. Qoryaha ayaa lagu daboolay ubaxyada ubaxa, iyo caaryada ayaa u muuqda on berry. Si aad uga takhalusaan wax xagta oo budada ah, waa lagama maarmaan, ka hor inta ubax muuqan, si buufin leh ash soodhada.
Meelaha Brown waxay saameeyeen taarikada caleenta, oo lagu arkay muuqaal dhibco bunni ah oo sare ee caleen.
Si aad u diyaariso strawberries beerta xilliga qaboobaha aad u baahan tahay:
Hilling iyo mulching waa waxa ugu horeeya ee la sameeyo. Geedo strawberries dayrta laguma talinayo, maadaama aad dhaawici karto xididada, mana yeelan doonaan waqti ay ka soo kabsadaan dhaxan ka hor. Sababtan oo kale, laguma talinayo in laga saaro cawska, laakiin halkii ka tago ilaa guga.
Daboolka strawberries u dabool si tartiib ah jiilaalka dhowr lakab. Waxaad isticmaali kartaa qalabka dhirta: caleemaha, caws engegan, laamood oo qallalan oo qallalan, markaa, marka barafku hoos u dhaco, dhig lakabka barafka. Qalabka macmalka ah, agrofibre ama agrotex waa habboon. Waxay ku hayaan qoyaan iyo heerkulka.
Cagaarshow waa in loo diyaariyaa jiilaalka ka hor inta aaney bilaabmin dhaxan ugu horreeya.